Xog: Xubnaha Midowga Musharaxiinta ee dagaalka u sacab tumaya iyo kuwa ka soo hor jeeda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Xog: Xubnaha Midowga Musharaxiinta ee dagaalka u sacab tumaya iyo kuwa ka soo hor jeeda * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Abdirisak M Tuuryare on 24th April 2021
Waxaa magaalada Muqdisho ka jira xaalad cakiran kadib markii la isku fahmi waayay siyaasadda doorashada dalka taa oo ku qasabtay Baarlamaanka inuu doorkiisa qaato.
Waxaa muddo kordhinta Labada sano si weyn uga hor yimid madaxda midowga musharaxiinta iyagoo sheegay ineysan madaxweynaha qaranka u aqoonsaneyn Maxamed Farmaajo.
Intaa kadib Midowga Musharaxiinta ayaa ku dhawaaqay iney dejiyeen boorarkoodii u sarnaa magaalada Muqdisho waxaana hadalkaas ku dhawaaqay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u muuqday inuu iclaaminayo dagaal.
Musharaxiinta ayaa u kala guuray degmooyin katirsan Gobalka Banaadir iyagoo isku balaarinaya magaalada islamarkana wada abaabul ciidan iyo hub aruursi.
Hadaba Musharaxiinta qaar ayaa doonaya in dagaaal lagu bilaabo DF halka kuwa kale ay ka soo horjeedaaan iyagoo dalabanaya in wadahal wax lagu raadiyo ama loo daayo Labada sano.
Madaxweyne Sheekh Shariif, Musharax Daahir Gelle, iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ka soo horjeeda in dalka uu ka dhaco dagaal iyagoo eegaya danta gobalka iyo shacabka Banaadir.
Waxaa dagaalka u durbaan tumaya Madaxweyne Xasan Sheekh, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Kheyre kuwaa oo dagaal waxba ka aqoonin islamarkana doonaya in dagaal lala galo DF.
Kooxda diidan dagaalka ayaa ka cabsi qaba inuu isku badalo mid sokeeye islamarkana ay soo shaac baxaan kooxo diimeedyo cusub oo ka faa’ideysanaya xasaradaha dalka ka jira iyadoo ay suuragal tahay inuu daba dheeraado.
Dhanka kale kuwa u durbaan tumaya ayaa aamisan in madaxweynaha xilka looga qaadi karo kaliya in dagaal lala galo islamarkana Soomaaliya loo aqoonsado Dowlad ku meel gaar ah, kalsoonidana ay caalamka kala laabtaan.